U Nu Museum - Yangon Thu Michelle Video
Places and landmarks, Video Jul 13, 2018
ဒီတစ်ခါတော့ ရန်ကုန်သူမီရှဲက ဆရာစံလမ်းထဲကနေဝင်ရင် ပြည်ထောင်စုလမ်းသွယ်မှာရှိတဲ့ ဦးနုနေအိမ် U Nu House Museum ကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာစံလမ်းပေါ်က စားသောက်ဆိုင်တွေကြရောက်ပြီး အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ ကျော်သွားကြတယ်လေ။ ပြောသာပြောရတာ… အမှန်တရားကိုဝန်ခံရရင် ဦးနုအကြောင်း သိပ်မသိပါဘူး။ ဦးနုကွယ်လွန်တဲ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တုန်းကတော့ ဦးနုကွယ်လွန်ပြီလို့တော့ အဖေတို့ပြောတာ ရေးတေးတေးကြားဖူးတယ်။ ဒီဦးနုပြတိုက်ကို ရိုက်မယ်ဆိုမှ ဦးနုရဲ့ တာတေစနေသားစာအုပ်ကို ရှာဖတ်ရတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ဦးနုအကြောင်း ပိစိသေးသေးလေး သိတော့တယ်။ သိပ်မသိသေးတော့ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာမပြောတတ်ဘူးရယ်…။ မြင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပဲ တောင်ပြော မြောက်ပြော လျှောက်ဖောရှောထားတယ်။
ဦးနုရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်/မကွယ်လွန်ခင်ထိ နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကို မေလ ၂၅ရက်နေ့က ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက လူအများလေ့လာလို့ရအောင် ပြတိုက်အနေနဲ့ ဖွင့်ထားပေးပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကပြောပြနေတဲ့သမိုင်းကို ပုံဖေ်ာ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခုသတိထားမိတာက ဓာတ်ပုံတော်တော်များများမှာဝတ်တဲ့ပုဆိုးအကွက်ကို သေသည်အထိသိမ်းထားတယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်း အမှတ်တရပြထားတယ်။ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတယ်လို့ လူသိများပြီး ဘုရားခန်းက အခန်းရဲ့ တစ်ဝက်နီးနီးရှိတယ်။ ပြီးတော့ ဦးနုပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ဗီနိုင်းနဲ့ထုတ်ထားတယ်။ ဒီစကားတွေရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ မေးမြန်းစပ်စုခဲ့ကြပါဗျို့ ….။
မြန်မာ့သမိုင်းအပြောင်းအလဲတွေအကြောင်းကို အရှိအတိုင်းရေးထားပြီး ကိုးကားအနေနဲ့ ဖတ်စရာမရှိတာ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ အခုချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအဆက်ဆက်အကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်အကြောင်း ကျောင်းသင်ရိုးတွေမှာ မသင်တော့ သိချင်ရင် တကူးတကရှာဖတ်ရတယ်။ အလွယ်တကူဖတ်စရာလဲမရှိတော့ အလှမ်းဝေးပြီး မသိကြတော့ဘူး။ ဒါတွေကို တဖြေးဖြေး ပြောင်းလဲနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောခဲ့တဲ့စကား တစ်ခုရှိတယ်။ “သမိုင်းဆိုတာ မ‘အ‘အောင် သင်တာ” တဲ့။ သမိုင်းကိုမေ့နေရင်၊ သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်ရင် သူများပြောသမျှ ဟုတ်နိုးနိုးနဲ့ ရောယောင်ပျောက်ကွယ်ကုန်မှာ။ ဒါကြောင့် သမိုင်းကို ချစ်တတ်အောင် ကြိုးစားကြပါစို့ ….
U Nu, wasaleading Burmese statesman, politician, nationalist, and political figure of the 20th century. He was the first Prime Minister of Burma under the provisions of the 1947 Constitution of the Union of Burma, from4January 1948 to 12 June 1956, again from 28 February 1957 to 28 October 1958, and finally from4April 1960 to2March 1962.
Now, U Nu Museum is open by his grandson. The address is 42, Union Lane, Near Saya San Road, Bahan township, Yangon, Myanmar, Yangon. Opening time is 10 a.m to4p.m, Fri, Sat and Sun only.